REPUBLICADAINIK | जिउँदो पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई श्रद्धाञ्जलि भन्ने सत्तारुढ अखिलका महरलाई प्रहरीले कारबाही गर्ला ? - REPUBLICADAINIK
जिउँदो पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई श्रद्धाञ्जलि भन्ने सत्तारुढ अखिलका महरलाई प्रहरीले कारबाही गर्ला ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का संयोजक ऐन महरले आफ्नो पदीय आचरण विपरितको टिप्पणी गर्दा आलोचित बन्नु परेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई संयोजक महरले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रद्धाञ्जलि लेखेर आलोचना गरेका छन् । उलने लेखेका छन्, ‘धेरै पढे विद्वान हुन्छ, विद्वान बिग्रे बाबुराम हुन्छ भन्थे पुष्टि हुँदै छ । यी गद्धार दलाल राष्ट्रघातीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जलि !’
संयोजक महरको टिप्पणीलाई सत्ताको उन्मादममा जथाभावी लेखेको भनेर आलोचना भएको छ । उनले जिउँदो मान्छेलाई श्रद्धाञ्जलि लेख्नु आफैमा गम्भीर गल्ती हो । उनलाई साइबर अपराध ब्युरोले कारबाही गर्छ वा गर्दैन हेर्न बाँकी छ ।
प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा कसैले आलोचना गर्दा पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने गरेको छ । केही व्यक्तिहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेको भन्दै जेलमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
अनेरास्ववियुका संयोजक महरलाई प्रहरीले कारबाही गर्छ वा उन्मुक्ति दिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
साइबर ब्युरो भोटाहिटीका प्रहरी निरीक्षक प्रवीण ताम्राकारले यो विषय आफूहरूले नहेर्ने बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका बेला उपत्यकाभित्रको साइबर क्राइमको केस अपराध महाशाखा टेकुले हेर्छ । हामीले होइन ।’ ताम्राकारले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा जो कसैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
अनेरास्ववियुका संयोजक महरलाई जिउँदो मान्छेलाई श्रद्धाञ्जलि लेख्ने कार्य गरेको भन्दै साइबर क्राइममा मुद्धा चलाएर कारबाहीको माग उठेको छ ।
विवादित हर्कत गर्दै आएका अनेरास्ववियुका संयोजक महरले सरकार र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कसैले आलोचना गर्‍यो भने ‘अरिँगाल’ बनेर प्रतिवादमा उत्रिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्ष अगाडि धुम्बाराहीमा सरकारको आलोचना भयो भने ‘अरिँगाल’ बनेर प्रतिवाद गर्नु भनेर निर्देशन दिएका थिए । ओलीको त्यो निर्देशनलाई अनेरास्ववियुका संयोजक महरले ईमान्दारिताका साथ पालना गर्दै आएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
Published : Saturday, 2020 May 23, 9:21 pm
कम्युनिस्ट मिलाउन खोज्ने वामदेवको प्रस्तावले बालुवाटारमा ‘तोरिको फूल’ देख्यो
कांग्रेस नेतृ प्रसाइँले झापाली जनताको शिर निहुराएको भन्दै ओलीको सातो लिइन्
झापामा ओलीका लोकप्रिय नेता कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश, सरिता प्रसाइँद्वारा स्वागत
अदालतले भिडको दवावमा फैसला गर्ने होइनः देउवा
कम्युनिस्टलाई अझै दुई वर्ष ब्यहोर्छौं, ओलीलाई जथाभावी गर्न दिन्नौँः डा.महत